En vente actuellement 07/12/2018
Lehilahy 42 taona aho, manambady ary manan-janaka 2.
Efa in-droa no nisaraka tamiko ilay vadiko, fa niverina ho azy ihany ary noraisiko noho ireo zaza.
Ireo vehivavy lany Miss Monde voalohany …
Efa tany amin’ny taona 1951 tany no nisian’ny fifaninana hatsaram-bika sy tarehy eo amin’ny vehivavy manerana izao tontolo izao, na ny Miss Monde. Andeha ho jerentsika an-tsary ireo Miss nanomboka tamin’ny taona niandohan’izany fifaninana Miss Monde izany.
Natao ho anao ve izy ? Andramo ireto dia ho fantatrao…
Misy lehilahy mahafinaritra sy mambabo avy hatrany, hany ka mampanonofy ny hiara-dalana aminy mandrakizay.
Ravioli (12 isa)
Mianjaika mena, maitso, fotsy, “doré”… lokon’ny noely
Ny loko mena, maitso, fotsy ary mivolom-bolamena (doré) no tena manamarika ny andro Noely.
Shopping “ bijoux”
1. Semainier - Bijouterie Ravaka Antaninarenina ambanin’ny Supermaki Cont : 034 12 512 04 2. Parure en argent serti- Bijouterie Ravaka Antaninarenina ambanin’ny Supermaki Cont : 034 12 512 04
Nandray ny toerany omaly ilay vehivavy meksikanina voalohany, lany ho ben’ny tanana
Omaly no napetraka amin’ny toerana maha Ben’ny Tanàna azy, ilay vehivavy voalohany voafidy amin’izany ao Meksika.
Lehilahy afrikanina nahabevohoka renim-pianakaviana iray niaraka amin’ny zanany 3 vavy
Lehilahy mpitsoa-ponenana 23 taona iray, tao Afrika no nahabevohoka renim-pianakaviana frantsay iray sy ny zanak’ity vehivavy ity, miisa 3 vavy.
Tranon-jazan’olona efa maty nanaovana grefy, nahazoana zazavavikely
Niteraka zazavavikely salama tsara ny renim-pianakaviana brezilianina iray, 32 taona, rehefa natao grefy tamin’ny tranon-jaza.
Laisse aller le passé et le passé te laissera aller
Antony iray tsy mampandroso ny olona ny fifikirana amin’ny zavatra efa lasa. Ao, ohatra, ireo tsy mety manadino ny havana, na ny olon-tiana efa lasa nandao, ka tsy mahavita manorina fiainam-baovao intsony.
Ireo mpanao sakafo sinoa eto amintsika…
Maro be ireo toeram-pisakafoana izay manolotra nahandro sinoa. Misy amin’izy ireo kosa anefa, rehefa tena dinihina, no mafilotra sy miavaka amin’ireo hafa. ireo nahandro sinoa atolony. Santionany ireto manaraka ireto,… ary efa nandramanay.
Ireo mpamokatra horonan-tsary malagasy mahatsikaiky
Efa maro ireo mpanao horonan-tsary fohy mitondra tsiky eto amintsika na ny atao hoe “podcast”. Ireto entina aminao ireto ireo miparitaka indrindra ny “video” tontosain’izy ireo.